Mụta otu esi agbanwe adreesị ozi-e gị metụtara na Apple ID | Esi m mac
Taa, ngwa na-enye gị ohere ịhazigharị imirikiti ọrụ ha nwere, ruo n'ókè nke na mmelite ahụ lekwasịrị anya na imeziwanye ọrụ ha, karịa ịnye atụmatụ ọhụrụ. O yiri ka ọ siri ike ịgbanwe data ntinye, nke na-amata anyị anyị na-enweta akaụntụ.
N’ụzọ ezi uche dị na ya anyị nwere ike ịgbanwe okwuntughe anyị, anyị aghaghi ime ya ugboro ugboro. Mana ozi email anyị ji amata onwe anyị dị ka ihe butere ụzọ nke gbagwojuru anya. Ka anyị lee ma ọ ga-ekwe omume ịme mgbanwe a.
Na omume, ọ naghị esiri ike ịgbanwe adreesị email e kenyere anyị Apple ID na akaụntụ. Cheta, mgbanwe a ga-emetụta Mac anyị, kamakwa ngwaọrụ Apple ndị ọzọ: iPad, iPhone, iPod na Apple TV. Adreesị ozi-e a na-enye anyị ohere ịnweta Storelọ Ahịa, iCloud na iTunesYa mere, biko payaa ntị zuru oke mgbe ị na-eme mgbanwe ahụ, ebe ọ bụ na anyị na-ejikwa ozi kachasị dị nro.
Nke mbụ, anyị ga-abanye na peeji nke njikwa Apple ID mbụ. Ọzọ anyị ga-enweta nzere anyị dị ugbu a. Ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ ndị nkwenye abuo, nwee ngwaọrụ ọzọ dị nso iji nwee ike ịbanye igodo enyere.
Ozugbo ịbanye, ị nwere ike ịhụ nhọrọ niile ị nwere ike ịkpọ ma gbanwee ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa: akaụntụ, nchekwa, ngwaọrụ, ịkwụ ụgwọ na mbupu na akwụkwọ akụkọ. Na nke mbụ, ị ga-ahụ bọtịnụ dị n'akụkụ aka nri elu na-acha anụnụ anụnụ, aha ya bụ «dezie»
Pị na ya na-arụ ọrụ, dịkwa na-acha anụnụ anụnụ, nhọrọ "Dezie email ..." dị n'okpuru ID anyị. Ugbu a, naanị anyị ga-pịa ya ma gbanwee adreesị ozi-e.
Anyị na-anata email na adreesị ozi-e ọhụrụ ahụ. Yabụ, ọ bụrụ na anyị emehie na akaụntụ email ahụ, mgbanwe a agaghị enwe mmetụta. Anyị ga-abanye koodu ọnụọgụ isii nke anabatara wee pịa n'ihu. Wee pịa “emere” iji chekwaa mgbanwe.
Na ụkpụrụ, ọ gaghị adị mkpa ịme mgbanwe na ngwaọrụ niile, dịka Apple ga-emere gị ya. Naanị ihe, buru n’uche na nke a ga-abụ ihe nchọpụta Apple ọhụụ n’ọdịnihu. Ana m akwado ka ị gbanwee ya na email gị na-agagharị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Mụta otu esi agbanwe adreesị ozi-e gị metụtara na Apple ID
Nnọọ. Enwere m ozi ịntanetị abụọ, otu na-arụ ọrụ na nke ọzọ. Mgbe m mepere mail m na google, nke onwe na-apụta mgbe niile. Anaghị m emepe laptọọpụ ọrụ na laptọọpụ m.
Kemgbe izu gara aga, email nke na-apụta bụ nke sitere na ọrụ.
Enweghị m ike ịnweta ndị ọrụ.
Zaghachi ka Encarna Galeote Padilla